Sokudla okwehla esiphundu futhi unempilo: Baked izinhlanzi iresiphi
Mangisho ukuthi inhlanzi kubhakwa, iresiphi zazo ungakhetha ngokubona kwayo, akukhona nsuku zonke kuphela, kodwa isidlo samaholide. Made by ehlukahlukene nososo, kubukeka olubabazeka kakhulu, futhi kungenzeka ingalungeli etafuleni yokudla. Bhaka izinhlobo ezihlukahlukene, wonke encane noma umucu izinhlanzi ezinkulu zasolwandle, kulesi simo, okuthandayo namanje inikezwe ithuba lesibili. Ngokuvamile, kwasolwandle akudingi ukupheka eside, ngakho-ke kwanele ukumgcina kuhhavini cishe isigamu sehora ukupheka isidlo.
Ukugubha isidlo sokuqala futhi okumnandi kungenziwa wabhaka izinhlanzi kanye ushizi sauce ukhilimu. It is kahle zokuhamba, fresh noma simisiwe salmon, kodwa ungakwazi ukuthatha namanye inhlanzi enkulu. Isidumbu kahle wageza ngamanzi abandayo (endaweni efudumele noma kushisa kungaba igoqe) is sihlanza it esuswa gills, amaphiko, umsila futhi ikhanda. Wabe usike lengthwise zibe yizicucu encane ukuthi ukubola irowu obukhulu eligcotshisiwekuhovini baking sheet. Ukulungisa sauce ikhethelo lokucuketfwe fat isilinganiso ifakwa usawoti, izinongo namakhambi oqoshiwe. Izithako kahle exubile, ingxube okuholela kuthululwe izinhlanzi sauce is ngokulinganayo kuzo zonke isidlo. Ku-salmon kahle evuthayo kuhhavini wagqoka isigamu sehora, ngaphambi nje kokuphela ukupheka ke ifafazwa nge fake yashizi ushizi kanzima. Lokhu wabhaka izinhlanzi recipe ukuthi silula, sikhule size elimnandi futhi okunomsoco, encibilika emlonyeni wakho.
Ukuze eyikati ukupheka, Pike, perch, cod, ungasebenzisa iresiphi ku okuzokwenza izinhlanzi wabhaka ngesiRashiya. Njengoba yenziwe nenhlanzi bahlanza uthathe nezixhobo. Esitsheni baking ezinhlangothini aliveza tincetu amazambane abilisiwe, maphakathi nawo - izingcezu inhlanzi eluhlaza. Zonke egcwele usoso, okuyinto zingafundwa njengoba ukhilimu omuncu kanye utamatisi, abafafazwe ushizi ogayiwe bese efakwa kuhhavini kuze kuphekwe. Kubalulekile kakhulu ukuqiniseka ukuthi isidlo akufanele stagnate, njengoba izingcezu inhlanzi liphuke uma kuhhavini isikhathi eside kakhulu.
Futhi wabhaka izinhlanzi iresiphi ezingaba unezithako ezengeziwe bangaba isidlo ngokugcwele wesibili ukuthi akudingi Hlobisa. Ngokwesibonelo, enziwe amazambane kanye imayonnaise. Ngenxa yale njongo, izinhlanzi fillet (tilapia eyayitholakala, i-turbot, njll) Ingabe uthathe yizicucu portioned, efakwé usawoti, pepper kanye kwesokunxele isikhashana. Amazambane ehlanzekile uthathe tincetu nomzimba omncane, utamatisi - tincetu mncane. On grater naphakathi bazokwenza lokho nakuBafana ushizi. Ngesimo ukulungele zibekwe amazambane isigamu okuphekwe, engeza ezinye usawoti kancane. Isendlalelo esilandelayo izinhlanzi, okuyilona elidingekayo ukuze ubeke utamatisi kanye ukubeka amazambane asele. Isendlalelo lokugcina kahle ugcobe nge imayonnaise, ufafaze ushizi, futhi zonke isidlo uya kuhhavini. Ukupheka isikhathi kuxhomeke degree of ukulungela, ngokuyinhloko imifino, ikakhulukazi amazambane, kodwa kaningana, akuthathi isikhathi esingaphezu kwehora. Isendlalelo kungenziwa wabeka u-anyanisi, izindandatho oqoshiwe, kuyothiwa esisogwini izinhlanzi. umkhiqizo ngamunye oyifunayo kancane podsolit. Iziqholo nenhlanzi izitsha kunezelwa encane nje, njengoba nabo ngokwabo elimnandi. Ukukhonza, phezulu izinhlanzi kungcono ukuhlobisa ngamakhambi oqoshiwe.
Futhi, kuvela ithenda wabhaka izinhlanzi recipe ukuthi izolandela. Njengoba yenziwe izinhlanzi nezibopho wabeka ku isikhunta. Ilungiselela usoso, okuyinto ke kuyothululwa. I ashisayo elicibilikile ufulawa ibhotela sengezwe, enyakaza kahle, washiya ukufudumeza, lapha ayethela ubisi ingilazi futhi okufanayo izinhlanzi umhluzi noma amanzi, alethwe ngamathumba. Sauce usawoti, pepper, cishe imizuzu engu-5 ngesikhathi abilayo ukushisa whereupon it is batheleka isigamu ingilazi ushizi vukuza, zonke okuxubile kuze nokonakala ephelele yokugcina. sauce abilayo ethelwa ku tincetu inhlanzi umucu, isidlo ibekwe kuhhavini.
Indlela Fry inyama eziphuma kuso?
Recipe hashi ku kefir
Zokupheka eziningana indlela ukupheka inhlanzi meatballs
ZaseCaucasia cuisine - izici kanye namasiko
Piti isobho: iresiphi
Ubuso bekhompyutha Wallpaper
I metro station "Vykhino": umlando omfushane
Game Dragon Age: Zamacala Ezihlubuki zangeNkathi Ephakathi: umkhonyovu
Amachibi nemifula waseBelarus. Incazelo emfushane imifula emikhulu kakhulu nasemachibini
Sifeza Umklamo elisophahleni ngezandla zakhe
Njengoba e "Facebook" ukususa imiyalezo: indlela
Ukuhlasela isibhamu "Turner". Entsha lokushaya isibhamu "Turner"
IzAga mayelana ubumsulwa isampula ngokuhlakanipha Slavic
Accounting - kuyinto ... Izici Imininingwane nje okungaqondile inqubo
Alex Fitness. Izibuyekezo ze-network enkulu amaqembu ezemidlalo